Umaki: i-alteryx | Martech Zone
I-Alteryx: Ipulatifomu ye-Analytic Process Automation (APA)
NgoLwesibili, Okthoba 20, 2020 NgoLwesibili, Okthoba 20, 2020 Douglas Karr
Lapho inkampani yami isiza futhi ishayela ohambweni lokuguqulwa kwedijithali ezinkampanini zebhizinisi, sigxila kuzindawo ezibalulekile ze-3 - abantu, izinqubo, namapulatifomu. Sibe sesakha umbono nomgwaqo wokusiza inkampani isebenzise futhi isebenze kahle ngaphakathi futhi iguqule umuzwa wamakhasimende ngaphandle. Kukuzibandakanya okunzima okungathatha izinyanga, kufaka phakathi imihlangano eminingi nobuholi kanye nokuhlaziywa okujulile kwedatha, amapulatifomu, nokuhlanganiswa ibhizinisi elincike kulo
NgoLwesine, Juni 14, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Lapho abantu bekhuluma ngama-analytics, kuvame ukukhawulelwa kusayithi, idatha ejwayelekile ejwayelekile kulo lonke inani labathengisi. Ezinhlanganweni ezinkulu ezinama-terabyte wedatha - kufaka phakathi idatha yokuthengwa kwamakhasimende, idatha yokubalwa kwabantu, idatha yezwe, idatha yezokuxhumana, njll - ipulatifomu ye-analytics emaphakathi ayisebenzi. Nayi ingxoxo emnandi phakathi kuka-Alteryx noBoris Evelson kaForrester ngesihloko: I-Alteryx ihlanganisa ubuhlakani bebhizinisi kanye nekhono lokuxhuma kumadatha amakhulu kulokho